10 Twitter Mistakes | Martech Zone
10 Twitter Zvikanganiso
Chitatu, June 12, 2013 Chipiri, June 11, 2013 Douglas Karr
Semunhu mukomana anotarisira hafu yegumi nemaviri maakaundi eTwitter (yemunhu, bhuku, kambani, blog uye nharaunda), ndinofanira kusawirirana ne # 8 pane ino infographic. Ini handina chokwadi neNavy Veterans pane yangu @navyvets twitter account inoda kunzwa nezve Corporate Blogging pa @corpblogging… Uye hapana anoda kunzwa rants dzangu dzezvematongerwo enyika pachangu account!
Twitter, senge chero imwe chikuva, ingori imwe nzira yekuti vanhu vataure nevamwe vanhu. Uye kune zvimwe zvisina kurayirwa zveTwitter maitiro uye zvinokundikana izvo, nepo ivo vangangodaro vasina chokwadi nekutodhonza paTwitter, zvinotokuvadza zvakanyanya kana zvikaitwa pachena. Saka kana iwe ukave uchigadzira imwe yeiyi gumi kukanganisa kwekutonga (inotapira DashBurst kubatana na Iyo Maple Mhando) muma tweets ako kana zvakatoipisisa mumigwagwa, ndapota mira ipapo!
Ndinoonga nguva nenguva yekukurudzira quote (# 7) tweet yekukurudzira futi!
Tags: chihuretwitter zvikanganiso
Douglas Karr Wednesday, June 12, 2013 Tuesday, June 11, 2013
Localytics: Mobile App Analytics uye App Kushambadzira
Zvemagariro Media SeCrisis Management Tool
MOS SEO masevhisi
Jun 17, 2013 pa1: 07AM
Ini handioni chakaipa nemamwe emapoinzi. Iyi ingori nzira iyo vanhu vanozvibata nayo muhupenyu chaihwo. asi havazvibate nenzira iyi paTwitter.
Jun 17, 2013 pa4: 01AM
Kutenda nekundipa kutenda kwekuti vamwe vanhu vaka svitswa neaya maitiro seni! hehe ndinobvuma kuti ndinogona kunge ndiri mudiki uye curmudgeonly, asi ini handikwanise kwehupenyu hwangu kuona nei vanhu vasingatore nguva yekuve zvishoma kuzviziva-nezve zvimwe zvezvinhu izvi. Kunyanya kutaurwa kunofanirwa kuenda kune (zvakanaka-zvine chinangwa) vanokurudzira vanoteedzera avo marara echitendero nevemweya anoita kuti ndinyungudike painowoneka pane chikafu.
Sep 24, 2013 pa 6: 42 AM
Kusabvumirana ne # 1 uye # 7, munhu wese anoshandisa Twitter nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, uye vanhu vane sarudzo yekusatevera, asi zvakazara runyorwa rwakanaka
Sep 24, 2013 pa 10: 07 AM
Ini ndinobvuma - uye ini handidi chaizvo chero runyorwa rwe "mitemo" yakapihwa madiki enhau enhau.